နေလင်းအောင်: ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအတွက်…
ခရစ္စမတ် ပွဲတော်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ် ပွဲတော်ဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှု၊ ပေးကမ်းမျှဝေမှု၊ ရယ်မောမှု၊ မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှု၊ အလှဆင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သားသားနားနားထုပ်ပိုးထားတဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးသားအပြစ်ကင်းတဲ့ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ နူးညံ့တဲ့ နှင်းဆီရောင်ပါးပြင်လေးနဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲက နတ်ဆိုးလေးနဲ့တူတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ဦးက တစ်ခုသော ခရစ္စမတ်မှာ အံ့ဖွယ်လက်ဆောင်တစ်ခု မပေးမီအချိန်ကတော့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအတွက်လို့ ကျွန်တော့်မှာ ယုံကြည်ချက်မရှိခဲ့ပါဘူး။
မာ့ခ်ဟာ အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ အတူနေရပါတယ်။ သူ့အဒေါ်ဟာ သက်လတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အစ်မဖြစ်သူရဲ့သားကို ကြည့်ရူ့စောင့်ရှောက်ရတဲ့အတွက် အလွန်အမင်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေရပါတယ်။ သူမသာ ကြင်နာမသနားတတ်ဘူးဆိုရင် သူဟာ အလုပ်လက်မဲ့၊ ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝဖြင့် လှည့်လည်တောင်းစားနေရမည်ဖြစ်ကြောင်း မာ့ခ်ကို အမြဲမပြတ် သတိပေးပါတယ်။ အိမ်မှာ ဆူပူကြိမ်းမောင်းမှုတွေ၊ အေးစက်စွာဆက်ဆံမှုတွေ တွေ့ကြုံနေရပေမယ့် သူဟာ ချိုသာပြီး နူးညံ့သိမ့်မွေ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဖြစ်နေပါတယ်။
ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကို အခန်းသန့်ရှင်းရေး ကူညီပေးဖို့ စောင့်နေမပေးမီက သူ့ကို ကောင်းကောင်းသတိမထားမိပါဘူး။ (သူ့အဒေါ်ရဲ့ ဒေါသကို ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာ နောင်တစ်ချိန်ရောက်မှ ကျွန်တော်သိလာခဲ့တယ်။) ကျွန်တော်တို့ဟာ တိတ်တဆိတ်၊ သက်သောင့်သက်သာဖြင့် အခန်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်နေ့တာအတွင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ အဲဒီအချိန်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့အတွက် စကားသိပ်မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မာ့ခ်ဟာ သူ့အမေအကြောင်းပဲ ပြောဖြစ်တာများပါတယ်။ သူ့အမေ သေဆုံးစဉ်က သူဟာ အလွန်ငယ်သေးပေမယ့် နူးညံ့ကြင်နာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သူ့အမေဟာ အချိန်အများစုမှာ သူနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းကုန်လွန်ပေးခဲ့တာကိုတော့ သူ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နား နီးလာတဲ့အခါ မာ့ခ်ဟာကျောင်းဆင်းချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူနေပေးဖို့ ပျက်ကွက်လာတော့တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူလာနိုးဖြင့် စောင့်မျှော်နေခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ ကုန်ဆုံးသွားသလို သူလည်း စာသင်ချိန်ပြီးတိုင်း အခန်းထဲကနေ သုတ်ခြေတင် ထွက်ခွါသွားဆဲပါပဲ။ တစ်ညနေခင်းမှာတော့ သူ့ကိုတားဆီးရင်း အခန်းသန့်ရှင်းရေးမှာ ဘာကြောင့် မကူညီရတော့တာလဲဆိုတာ မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို လွမ်းနေမိကြောင်း ပြောလိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ မီးခိုးရောင် မျက်လုံးကြီးတွေဟာ စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် အရည်ဖြာလဲ့ရင်း “ကျွန်တော့်ကိုလွမ်းနေတာ တကယ်လား”လို့ သူက ပြန်မေးပါတယ်။
သူဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အကူအညီ အကောင်းဆုံးပေးသူဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ “ခရစ္စမတ်ပွဲတော်မှာ ခင်ဗျားကို အံ့သြဝမ်းသာသွားအောင် လုပ်မလို့ပါ” သူဟာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် တိုးတိုးပြောဆိုလာပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောဆိုပြီးနောက် သူဟာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် အခန်းထဲကနေ သုတ်ခြေတင် ထွက်ခွာသွားပြန်တယ်။ အဲဒီနောက်လည်း ကျောင်းဆင်းချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူ နေမပေးတော့ပါဘူး။
ခရစ္စမတ်ပွဲတော်မတိုင်မီ ကျောင်းနောက်ဆုံးနေ့ရက် ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့ညနေမှာ မာ့ခ်ဟာ အလွန်နောက်ကျမှ အခန်းထဲ ခပ်နှေးနှေး ဝင်လာခဲ့တယ်။ သူ့ကျောကုန်းနောက် လက်ထဲမှာ တစ်ခုခု ဝှက်ထားသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော် လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ “ခင်ဗျားကို လက်ဆောင်ပေးမလို့ပါ။ ခင်ဗျား နှစ်သက်မယ်ထင်ပါတယ်” လို့ သူဟာ ရှက်ရွံ့စွာ ပြောဆိုလာပါတယ်။ သူ့လက်ကို ဆန့်တန့်လိုက်တဲ့အခါ သူ့လက်ဖဝါးမှာ သေးငယ်တဲ့ သစ်သားဘူးလေးတစ်ခု ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
“မာ့ခ်ရေ…ဘူးလေးက အရမ်းလှတယ်။ အထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ” လို့ ကျွန်တော်ဟာ အဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း မေးလိုက်ပါတယ်။
“အို…ဘူးထဲရှိတာကို ခင်ဗျား မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အဲဒီအရာကို ထိတွေ့ခံစားလို့လဲ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမေ အမြဲတမ်း ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီလက်ဆောင်လေးဟာ တစ်ချိန်လုံး အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်။ ချမ်းအေးတဲ့ညတွေမှာ နွေးထွေးစေလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးတည်း ရှိနေတဲ့အခါ လုံခြုံစေလိမ့်မယ်တဲ့”
ဘာမှမပါရှိတဲ့ ဘူးလေးထဲ ကျွန်တော် ငေးစိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
“မာ့ခ်ရေ…အဲလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ဆောင်က ဘာလဲ” လို့ ကျွန်တော်က ညင်ညင်သာသာ မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ သူဟာ တီးတိုးညင်သာစွာပြောဆိုလာပါတယ်။ “အဲဒါ မေတ္တာတရားပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အမေ အမြဲတမ်း ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ မေတ္တာတရားသာ ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့” အဲဒီနောက် သူဟာ ကျွန်တော့်ကိုကျောပေးရင်း အခန်းထဲကနေ တိတ်ဆိတ်စွာ ထွက်ခွာသွားတော့တယ်။
အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်တော့်အခန်းထဲ စန္ဒယားစင်ပေါ်မှာ စွန့်ပစ်သစ်သား အပိုင်းအစများဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်ဘူးလေးကို တင်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဘူးလေးထဲမှာ မေတ္တာတရားရှိကြောင်း ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါ မေးမြန်းစူးစမ်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ ပဟေဠိဆန်ဆန် မျက်ခုံးပင့်သွားတာကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော် ပြုံးရုံသာ ပြုံးနေလိုက်တော့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်…ခရစ္စမတ်ဆိုတာ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုနှင့် သီချင်းသံစဉ်များ၊ အံ့ဖွယ်ပစ္စည်းလက်ဆောင်များ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ ခရစ္စမတ်ဆိုတာ မေတ္တာတရားအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref; Christmas is for Love by Unknown
CHRISTMAS IS FOR LOVE – author unknown
Mark was an 11 year old orphan… who lived with his aunt,abitter middle aged woman greatly annoyed with the burden of caring for her dead sister’s son. She never failed to remind young Mark, if it hadn’t been for her generosity, he would beavagrant, homeless waif. Still, with all the scolding and chilliness at home, he wasasweet and gentle child. I had not noticed Mark particularly until he began staying after class each day (at the risk of arousing his aunt’s anger, I later found) to help me straighten up the room. We did this quietly and comfortably, not speaking much, but enjoying the solitude of that hour of the day. When we did talk, Mark spoke mostly of his mother.
Posted by နေလင်းအောင် at 7:29 AM